နာမည်ကြီးဘောလုံးသမားဖြစ်အောင် လျှောက်လှမ်းခဲ့ရတဲ့ ယော်ဂျင်ဟိုရဲ့ ဘ၀ခရီး
မိခင်ရဲ့ ခွန်အားတွေနဲ့အတူ နာမည်ကြီးဘောလုံးသမားဖြစ်အောင် လျှောက်လှမ်းခဲ့တဲ့ Jorginho ရဲ့ဘ၀ခရီးလမ်း
26 Jul 2018 . 4:41 PM
ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံ၊ တောင်ဘက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ Imbituba ဒေသဟာ လူဦးရေ(၄)သောင်းနီးပါးနေထိုင်ရာ ပယ်လယ်ကမ်းခြေဒေသတစ်ခုဖြစ်ပြီး သဲမွမွသောင်ခုံ၊ ပြာလဲ့လဲ့ရေပြင် ၀န်းရံထားတာကြောင့် နေချင့်စဖွယ်ကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုပါပဲ။ အဲဒီ သဲသောင်ပြင်ဟာ အခု ချယ်လ်ဆီးကစားသမားသစ် ယော်ဂျင်ဟို Jorginho ငယ်စဉ်တုန်းက ဘောလုံးကစားခဲ့ဖူးရာနေရာ၊ နာမည်ကျော် ဘောလုံးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ အိပ်မက်တွေ စတင်ခဲ့တဲ့နေရာ။ မိခင်ဖြစ်သူကလည်း အမျိုးသမီးဘောလုံးသမားတစ်ဦးဖြစ်တာကြောင့် ယော်ဂျင်ဟိုရဲ့ ဘောလုံးသမားဖြစ်ဖို့ အိပ်မက်တွေက သူ့မိခင်ဆီကနေ စီးဆင်းလာတယ်လို့ပဲဆိုရမလား။
၂၀၁၃ တုန်းက ယော်ဂျင်ဟိုဟာ သူ့မိခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အခုလိုပြောခဲ့ဖူးတယ်။”ကျွန်တော့်အမေက ဘောလုံးကစားတတ်တော့ အမေ့ဆီကနေ ဘောလုံးစွမ်းရည်တွေ အများကြီး သင်ယူခဲ့ရတယ်။ ဒီနေ့အထိ အမေဟာ ဘောလုံးကစားနေဆဲဖြစ်ပြီး ဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်တာတွေကို အမေက တော်တော် နားလည်တာဗျ။ ငယ်ငယ်ကဆိုရင် ကမ်းခြေကို ဘောလုံးတစ်လုံးနဲ့ ကျွန်တော့်ကို ခေါ်သွားပြီး နေ့လည်တစ်ပိုင်းလုံး သဲတောထဲမှာ နည်းစနစ်ပိုင်း လေ့ကျင့်မှုတွေလုပ်ခဲ့ရပါတယ်”။
ယော်ဂျင်ဟိုရဲ့ မိခင်ဖြစ်သူ Maria Tereza Freitas က ယော်ဂျင်ဟိုကို ဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲကစားရင် လိုအပ်တဲ့အရည်အသွေးတွေနဲ့ ပြည့်စုံစေချင်တဲ့အပြင် ပြိုင်ဘက်တွေထက်လည်း ခြေတစ်လှမ်းသာတဲ့သူဖြစ်စေချင်တာပါ။ ယော်ဂျင်ဟို အသက်(၆)နှစ်အရွယ်အရောက်မှာ သူ့တို့မိသားစုအိမ်ထောင်ရေး ပြိုကွဲခဲ့ပြီး Maria Tereza Freitas ဟာ ယော်ဂျင်ဟိုအတွက် စားဝတ်နေရေးကိုသာမက ဘောလုံးလေ့ကျင့်ပေးတဲ့ နည်းပြတစ်ဦး ဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်လာခဲ့တယ်။ သူမက နေ့ခင်းပိုင်းမှာ စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုရဲ့ သန့်ရှင်းရေးအဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ရပြီး သင့်တင့်တဲ့လစာရရှိတာကြောင့် သားဖြစ်သူအတွက် ဘောကန်ဖိနပ်၊ ဘောလုံးတွေ ၀ယ်ယူထောက်ပံ့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အသက်(၁၃)နှစ်အရွယ်မှာ Imbituba ဒေသမှာရှိတဲ့ ကလပ်အသင်း Bruscão ကို ရောက်ရှိခဲ့ပြီး အဲဒီကလပ်က သူတို့နေတဲ့နေရာနဲ့ ကီလိုမီတာ(၁၈၀)အထိ ဝေးကွာတာကြောင့် မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ ရင်ခွင်ကို ခေတ္တခွဲခွာခဲ့ရပါတယ်။ (၁၃)နှစ်အရွယ် ကလေးတစ်ဦးအတွက် ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ယာနဲ့ ဘ၀အတွက်တစ်ခုတည်းသော အားကိုးရာ အမေဖြစ်သူတို့ကို ခွဲခွာခဲ့ရတာ ဘယ်လောက်အထိ နာကျင်ဝမ်းနည်းနေမလဲဆိုတာ ခံစားကြည့်ရင်သိမှာပါ။ ယော်ဂျင်ဟိုဟာ အဲဒီအချိန်တွေကို ပြန်တွေးလိုက်ရင် အခုထက်ထိ နာကျင်ခံစားနေရဆဲပါပဲ။ “အဲဒီတုန်းက အကြောင်းတွေ ပြန်ပြောတိုင်း ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာ တစ်ခုခုတစ်ဆို့နေသလို ခံစားရပါတယ်”။
ယော်ဂျင်ဟိုအတွက် အောင်မြင်မှုလမ်းစက မကြာခင်မှာပဲ စတင်လာပါတော့တယ်။ (၂)နှစ်အကြာမှာ အီတလီဒုတိယတန်းကလပ် ဗီရိုနာလူငယ်အကယ်ဒမီအတွက် ကစားသမားရွေးချယ်တဲ့အထဲမှာ ယော်ဂျင်ဟိုလည်း အပါအ၀င်ဖြစ်ခဲ့ပြီး အီတလီမြေကို ပထမဆုံးအကြိမ်ခြေချခွင့်ရခဲ့တယ်။ ဗီရိုနာလူငယ်အကယ်ဒမီအသင်းမှာ ၂၀၀၇ ကနေ ၂၀၁၀ အထိဖြတ်သန်းခဲ့ပြီး ၂၀၁၀ မှာ စီနီယာအသင်းနဲ့ ပထမဆုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ် စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။
တဖြည်းဖြည်းတောက်ပလာတဲ့ ယော်ဂျင်ဟိုကို စီးရီးအေထိပ်သီး နာပိုလီအသင်းက သတိပြုမိခဲ့ပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ ခေါ်ယူစာချုပ်ခဲ့တယ်။ ယော်ဂျင်ဟိုအတွက် အလှည့်အပြောင်းတွေကို ဖန်တီးပေးခဲ့သူက အခု ချယ်လ်ဆီးအသင်းမှာ လက်တွဲရမယ့် သူ့ဆရာ ဆာရီ Sarri ပါပဲ။ ဆာရီရဲ့ နည်းဗျူဟာတွေကြောင့် ယော်ဂျင်ဟိုခြေစွမ်းက ပိုတောက်ပလာပြီး နာပိုလီအသင်းအဓိက ကစားသမားတစ်ဦးအဖြစ် ပါဝင်ခွင့်ရခဲ့တယ်။
ဒါကြောင့်ပဲ ချယ်လ်ဆီးနည်းပြသစ်အဖြစ် ဆာရီကို ခန့်အပ်ခဲ့ချိန်မှာ သူ့တပည့်ဟောင်း ယော်ဂျင်ဟိုကို ပထမဆုံးခေါ်ယူခဲ့တာပါ။ ဆာရီက”ယော်ဂျင်ဟိုဟာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကောင်းမွန်ရုံသာမက technical player တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကအကျဆုံးစွမ်းရည်ကတော့ ဘောလုံးကစားနေရင်း သူ့စိတ်ထဲမှာ ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကို စဉ်းစားဆုံးဖြတ်မှု တိကျမှန်ကန်တာပဲဖြစ်ပါတယ်”လို့ ချီးကျူးခဲ့တယ်။
ဒါကတော့ ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံရဲ့ မထင်မရှားကမ်းခြေဒေသတစ်ခုကနေ အခု နာမည်ကြီးပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲကို ခြေချခွင့်ရအောင် လျှောက်လှမ်းခဲ့တဲ့ ယော်ဂျင်ဟိုရဲ့ ဘ၀ဇာတ်ကြောင်းပါပဲ။ အခုအချိန်ဆိုရင် ယော်ဂျင်ဟိုရဲ့မိခင် Freitas တစ်ယောက် သားဖြစ်သူရဲ့ အောင်မြင်မှုကို ကြည့်ပြီး ကြည်နူးဝမ်းသာမှုနဲ့အတူ မျက်ရည်တွေ ကျဆင်းနေမလားဆိုတာ . . .
မိခငျရဲ့ ခှနျအားတှနေဲ့အတူ နာမညျကွီးဘောလုံးသမားဖွဈအောငျ လြှောကျလှမျးခဲ့တဲ့ Jorginho ရဲ့ဘဝခရီးလမျး
ဘရာဇီးလျနိုငျငံ၊ တောငျဘကျပိုငျးမှာရှိတဲ့ Imbituba ဒသေဟာ လူဦးရေ(၄)သောငျးနီးပါးနထေိုငျရာ ပယျလယျကမျးခွဒေသေတဈခုဖွဈပွီး သဲမှမှသောငျခုံ၊ ပွာလဲ့လဲ့ရပွေငျ ဝနျးရံထားတာကွောငျ့ နခေငျြ့စဖှယျကောငျးတဲ့နရောတဈခုပါပဲ။ အဲဒီ သဲသောငျပွငျဟာ အခု ခယျြလျဆီးကစားသမားသဈ ယျောဂငျြဟို Jorginho ငယျစဉျတုနျးက ဘောလုံးကစားခဲ့ဖူးရာနရော၊ နာမညျကြျော ဘောလုံးသမားတဈယောကျဖွဈဖို့ အိပျမကျတှေ စတငျခဲ့တဲ့နရော။ မိခငျဖွဈသူကလညျး အမြိုးသမီးဘောလုံးသမားတဈဦးဖွဈတာကွောငျ့ ယျောဂငျြဟိုရဲ့ ဘောလုံးသမားဖွဈဖို့ အိပျမကျတှကေ သူ့မိခငျဆီကနေ စီးဆငျးလာတယျလို့ပဲဆိုရမလား။
၂၀၁၃ တုနျးက ယျောဂငျြဟိုဟာ သူ့မိခငျနဲ့ပတျသကျပွီး အခုလိုပွောခဲ့ဖူးတယျ။”ကြှနျတေျာ့အမကေ ဘောလုံးကစားတတျတော့ အမဆေီ့ကနေ ဘောလုံးစှမျးရညျတှေ အမြားကွီး သငျယူခဲ့ရတယျ။ ဒီနအေ့ထိ အမဟော ဘောလုံးကစားနဆေဲဖွဈပွီး ဘောလုံးနဲ့ပတျသကျတာတှကေို အမကေ တျောတျော နားလညျတာဗြ။ ငယျငယျကဆိုရငျ ကမျးခွကေို ဘောလုံးတဈလုံးနဲ့ ကြှနျတေျာ့ကို ချေါသှားပွီး နလေ့ညျတဈပိုငျးလုံး သဲတောထဲမှာ နညျးစနဈပိုငျး လကေ့ငျြ့မှုတှလေုပျခဲ့ရပါတယျ”။
ယျောဂငျြဟိုရဲ့ မိခငျဖွဈသူ Maria Tereza Freitas က ယျောဂငျြဟိုကို ဘောလုံးပှဲတဈပှဲကစားရငျ လိုအပျတဲ့အရညျအသှေးတှနေဲ့ ပွညျ့စုံစခေငျြတဲ့အပွငျ ပွိုငျဘကျတှထေကျလညျး ခွတေဈလှမျးသာတဲ့သူဖွဈစခေငျြတာပါ။ ယျောဂငျြဟို အသကျ(၆)နှဈအရှယျအရောကျမှာ သူ့တို့မိသားစုအိမျထောငျရေး ပွိုကှဲခဲ့ပွီး Maria Tereza Freitas ဟာ ယျောဂငျြဟိုအတှကျ စားဝတျနရေေးကိုသာမက ဘောလုံးလကေ့ငျြ့ပေးတဲ့ နညျးပွတဈဦး ဖွဈမှနျးမသိဖွဈလာခဲ့တယျ။ သူမက နခေ့ငျးပိုငျးမှာ စားသောကျဆိုငျတဈခုရဲ့ သနျ့ရှငျးရေးအဖွဈ လုပျကိုငျခဲ့ရပွီး သငျ့တငျ့တဲ့လစာရရှိတာကွောငျ့ သားဖွဈသူအတှကျ ဘောကနျဖိနပျ၊ ဘောလုံးတှေ ဝယျယူထောကျပံ့နိုငျခဲ့ပါတယျ။
အသကျ(၁၃)နှဈအရှယျမှာ Imbituba ဒသေမှာရှိတဲ့ ကလပျအသငျး Bruscão ကို ရောကျရှိခဲ့ပွီး အဲဒီကလပျက သူတို့နတေဲ့နရောနဲ့ ကီလိုမီတာ(၁၈၀)အထိ ဝေးကှာတာကွောငျ့ မိခငျဖွဈသူရဲ့ ရငျခှငျကို ခတ်ေတခှဲခှာခဲ့ရပါတယျ။ (၁၃)နှဈအရှယျ ကလေးတဈဦးအတှကျ ကိုယျ့အိမျကိုယျ့ယာနဲ့ ဘဝအတှကျတဈခုတညျးသော အားကိုးရာ အမဖွေဈသူတို့ကို ခှဲခှာခဲ့ရတာ ဘယျလောကျအထိ နာကငျြဝမျးနညျးနမေလဲဆိုတာ ခံစားကွညျ့ရငျသိမှာပါ။ ယျောဂငျြဟိုဟာ အဲဒီအခြိနျတှကေို ပွနျတှေးလိုကျရငျ အခုထကျထိ နာကငျြခံစားနရေဆဲပါပဲ။ “အဲဒီတုနျးက အကွောငျးတှေ ပွနျပွောတိုငျး ကြှနျတေျာ့ရငျထဲမှာ တဈခုခုတဈဆို့နသေလို ခံစားရပါတယျ”။
ယျောဂငျြဟိုအတှကျ အောငျမွငျမှုလမျးစက မကွာခငျမှာပဲ စတငျလာပါတော့တယျ။ (၂)နှဈအကွာမှာ အီတလီဒုတိယတနျးကလပျ ဗီရိုနာလူငယျအကယျဒမီအတှကျ ကစားသမားရှေးခယျြတဲ့အထဲမှာ ယျောဂငျြဟိုလညျး အပါအဝငျဖွဈခဲ့ပွီး အီတလီမွကေို ပထမဆုံးအကွိမျခွခေခြှငျ့ရခဲ့တယျ။ ဗီရိုနာလူငယျအကယျဒမီအသငျးမှာ ၂၀၀၇ ကနေ ၂၀၁၀ အထိဖွတျသနျးခဲ့ပွီး ၂၀၁၀ မှာ စီနီယာအသငျးနဲ့ ပထမဆုံးပရျောဖကျရှငျနယျ စာခြုပျခြုပျဆိုခဲ့ပါတယျ။
တဖွညျးဖွညျးတောကျပလာတဲ့ ယျောဂငျြဟိုကို စီးရီးအထေိပျသီး နာပိုလီအသငျးက သတိပွုမိခဲ့ပွီး ၂၀၁၄ ခုနှဈမှာ ချေါယူစာခြုပျခဲ့တယျ။ ယျောဂငျြဟိုအတှကျ အလှညျ့အပွောငျးတှကေို ဖနျတီးပေးခဲ့သူက အခု ခယျြလျဆီးအသငျးမှာ လကျတှဲရမယျ့ သူ့ဆရာ ဆာရီ Sarri ပါပဲ။ ဆာရီရဲ့ နညျးဗြူဟာတှကွေောငျ့ ယျောဂငျြဟိုခွစှေမျးက ပိုတောကျပလာပွီး နာပိုလီအသငျးအဓိက ကစားသမားတဈဦးအဖွဈ ပါဝငျခှငျ့ရခဲ့တယျ။
ဒါကွောငျ့ပဲ ခယျြလျဆီးနညျးပွသဈအဖွဈ ဆာရီကို ခနျ့အပျခဲ့ခြိနျမှာ သူ့တပညျ့ဟောငျး ယျောဂငျြဟိုကို ပထမဆုံးချေါယူခဲ့တာပါ။ ဆာရီက”ယျောဂငျြဟိုဟာ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာ ကောငျးမှနျရုံသာမက technical player တဈဦးလညျးဖွဈပါတယျ။ အဓိကအကဆြုံးစှမျးရညျကတော့ ဘောလုံးကစားနရေငျး သူ့စိတျထဲမှာ ဘာလုပျရမလဲဆိုတာကို စဉျးစားဆုံးဖွတျမှု တိကမြှနျကနျတာပဲဖွဈပါတယျ”လို့ ခြီးကြူးခဲ့တယျ။
ဒါကတော့ ဘရာဇီးလျနိုငျငံရဲ့ မထငျမရှားကမျးခွဒေသေတဈခုကနေ အခု နာမညျကွီးပရီးမီးယားလိဂျပွိုငျပှဲကို ခွခေခြှငျ့ရအောငျ လြှောကျလှမျးခဲ့တဲ့ ယျောဂငျြဟိုရဲ့ ဘဝဇာတျကွောငျးပါပဲ။ အခုအခြိနျဆိုရငျ ယျောဂငျြဟိုရဲ့မိခငျ Freitas တဈယောကျ သားဖွဈသူရဲ့ အောငျမွငျမှုကို ကွညျ့ပွီး ကွညျနူးဝမျးသာမှုနဲ့အတူ မကျြရညျတှေ ကဆြငျးနမေလားဆိုတာ . . .